भरतपुर अस्पतालद्वारा तीन औषधि सप्लायर्सलाई कारबाही – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७८ कार्तिक ५ गते १२:३० मा प्रकाशित
चितवन । भरतपुर अस्पतालले औषधिपसलमा सम्झौता अनुसारको औषधि नल्याउने तीन सप्लायर्सलाई कारबाही गरेको छ । सन फार्मेसी पोखरा, हिमसागर मेडिकल हल पोखरा र मेडिसेल्स फर्मा भरतपुरलाई कारबाही गरेको हो ।
अस्पताल विकास समितिको बैठकको निर्णय अनुसार ती सप्लायर्सलाई कारबाही गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेललाई जानकारी दिए । उनका अनुसार अस्पतालमा आवश्यक औषधि खरिदको आदेश दिइसके पछि पनि उनीहरुले औषधि नल्याएका जनाइएको छ ।
सन फार्मेसीले मधुमेहका बिरामीलाई आबश्यक पर्ने ‘मेटफर्मीन’ नामक औषधि विगत दुई महिनादेखि उपलब्ध गराउन छाडेको थियो । सो औषधि फार्मेसीले सम्झौताअनुसार १।४० पैसा प्रति ट्याब्लेटमा अस्पताललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्थ्यो ।
यस्तै हिमसागर मेडिकलले मेटफर्मीन–ग्लिमेप्राइड नामक औषधि समयमा नल्याएको जनाउँदै कारबाही गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि माग गरिएको औषधि नपाउँदा बिरामी मर्कामा पर्न थालेको जनाउँदै अस्पतालले आफैँ खरिद गरी सम्झौताभन्दा बढीको मूल्य ठेकेदार कम्पनीलाई तिर्न लगाएको छ ।
सो औषधि सम्झौता अनुसार ६.९८ पैसा प्रतिट्याब्लेट पर्नेमा अस्पतालले बाहिरबाट खरिद गर्दा रु सात मा खरिद गरेको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । यस हलसँग १८१ प्रकारका औषधि ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।
कारबाहीमा पर्नेमा मेडिसेल्स फर्माले डेक्सामेथासोन इन्जेक्सन (जीवन रक्षक औषधि) आकस्मिक कक्ष, सघन उपचार कक्ष र कोरोना भाइरस संक्रमितलाई समेत प्रयोग हुने औषधि नल्याए पछि कारबाही गरिएको छ । सम्झौताअनुसार रु ११ प्रतिभाइलमा ल्याउनुपर्ने सो औषधि अस्पतालले बाहिरबाट खरिद गरी ल्याउँदा रु १८.१२ पैसा पर्न गएको प्रमुख लामिछानेले जनाकारी दिए ।
समयमा औषधि नापउँदा सेवाग्राही मारमा पर्न गएकाले कारबाही गरिएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डन्ट प्रा. डा. कृष्ण पौडेलले बताए । अस्पतालले खरिद नियम अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘समयमा औषधि नल्याउने ठेकेदारलाई नियमित जानकारी गराइएको छ, समयमा औषधि नल्याए कानून अनुसार कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढाउँछौँ ।’ समयमा औषधि नल्याउने कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार कारबाही गरी कालोसूचीमा राख्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागमा सिफारिस गरिने उनले जानकारी दिए ।